देशभक्त हुनका लागि पार्टीको सिद्धान्तमात्र राष्ट्रवादी भएर पुग्दैन, पार्टी हाक्ने नेताको मुटुभित्र पनि राष्ट्र हुनुपर्छ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
देशभक्त हुनका लागि पार्टीको सिद्धान्तमात्र राष्ट्रवादी भएर पुग्दैन, पार्टी हाक्ने नेताको मुटुभित्र पनि राष्ट्र हुनुपर्छ
देशभक्त हुनका लागि पार्टीको सिद्धान्तमात्र राष्ट्रवादी भएर पुग्दैन, पार्टी हााक्ने नेताको मुटुभित्र पनि राष्ट्र हुनुपर्छ । सिद्धान्त बगारेर राष्ट्रवादी बन्नु र देशको एक खण्डको मात्र माँग गर्नु भनेको भनेको लेण्डुप, मिर्जाफर हुनु हो जो कहिल्यै राष्ट्रवादी हुन सकेनन् । इतिहासको पन्नामा सरापमा सिमि तबनेका छन् । अरस्तुले भनेका थिए– भूगोलको जानकारी बिना राजनीतिको ज्ञानमा बृद्धि हुनसक्दैन । यसैगरी नेपोलियन बोनापार्टले व्यवहारिक ज्ञानपछि भनेका हुन्– कुनै देशको बिदेश नीति त्यस देशको भूगोलद्वारा निर्धारित हुन्छ । राजनीतिक यथार्थ यही हो, जुन वर्तमान कालखण्डमा हरेक मुलुकले अंगीकार गरेका छन् ।नेपालको भौगोलिक बनोट विषम छ, यसभित्र हिमाल छ, पहाड र समथल भूभाग छ । जनसंख्याको बनावट यस्तो छ कि यहाा १ सय २६ जाति बसोबास गर्छन्, अनेकतामा एकताको अनुपम मिश्रणको दृश्य हो यो । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नेपालको जस्तो विषमतायुक्त विशेषता पाउन सकिन्न ।
मधेसमा पहाड मिसाउन किन पाइदैन ? पहाड नेपाल होइन ? मधेस नेपालभन्दा पृथक भूमि हो ? मधेस किन बहुलराष्ट्रवादको नारा उछालिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र हो, नेपालको राष्ट्रियता एउटै छ । त्यो हो नेपाली राष्ट्रियता । ५४ हजार बर्गमाइलको नेपाली भूभाग एक थियो, एक छ र एक रहनेछ । यो भूभागमा बसोबास गर्नेहरु एकक्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा आवतजावत गर्न स्वतन्त्र छन् र एउटा क्षेत्रलाई अलग गर्नुपर्छ भन्नु बिकृत मानसिकता हो । ठाडो शव्दमा भन्ने हो भने त्यो राष्ट्रघात नै हो । मधेसमात्र प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माँग अराष्ट्रिय माग हो ।
जनबलसहित स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पुगेकाहरुले देशको कुरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक समस्याको हल संसदबाट निकाल । देश फोड्ने होइन, जोड्नेतिर लाग । जनादेश देश बनाउन दिएका हुन् जनताले, जनादेशको सम्मान गर । कहाँ कहाँ छ, कमी कमजोरी सच्याउ, देशलाई नहोच्याउ । गौरव गर देशप्रति, देशमाथि बलात्कार नगर । अव देश घातकहरु उम्लिने र जिम्लिने, संविधानले आँखा चिम्लिने समय कायम रहनु भनेको असफल हुनु हो ।आगामी दिन शान्ति, सुशासन र समृद्धिको हो । यसका लागि गर्नुपर्ने काम गर, देश भाँड्ने काम नगर ।